Spyera Ongororo 2021 - Spyera Kasitoma Wongororo @PhonesSpy
January 3, 2021 Jeff - Mumiriri weKutsigira kwehunyanzvi 22 Comments Nhare kusora - ZVINOGONESESA
1 Spyera Runhare Ongororo - PROS
2 Spyera Runhare Ongororo - Cons
3 Tenga Spyera Ongororo
4 Kutenga Maitiro
5 Spyera Yemahara Kurodha pasi
6 Tenga Spyera Ongororo Mhedziso
7 Dhawunirodha uye gadza Spyera Ongororo
8 Spyera Dhawunirodha Ongororo
9 Dhawunirodha Spyera Mhedziso
10 Spyera Isa Ongororo
11 Isa Spyera Mhedziso
12 iPhone uye Android gadza uye utore Zvinodiwa Ongororo
13 Main Maitiro Spyera Ongororo
14 Main maficha Spyera Mhedziso
15 Spyera Kutsigira Ongororo
Tsigira FlexiSPY Mhedziso
17 Kugumisa Kwekupedzisira
Muizvi 2021 Spyera ongororo, Ini ndichakuudza zvese zvakanakira Spyera nezvazvakaipira. Ini zvakare ndichakuudza, mumaonero angu, unofanira iwe kana haufaniri kutenga?
Ini ndichaongorora aya matanho eSpyera:
dhawunirodha uye gadza maitiro eApple ne iPhone,
Spyera Runhare Ongororo - ZVAKANAKA
1. Kutenga Ongororo
Iko mukana wekutenga Spyera ndeyekuti maitiro acho ari nyore, anokurumidza uye akachengeteka nekuti zvinogona kuitwa chete kubva kune yakachengeteka online yekutenga peji.
Mukana wechipiri ndewokuti software iyi inogadzirwa nedhijitari uye unogona kutenga uye kuwana chigadzirwa mune tsamba zvisinei kuti uripi.
Mukana wekupedzisira wandinofanira kutaura mune ino Spyera ongororo ndeyekuti iwe unopihwa Mazuva gumi akazara ekudzosera inishuwarenzi. Kana iwe uchida kutenga uye kuyedza iyo app, iwe uchave unokwanisa kuwana iyo yakazara kudzoserwa kuti iwe ugone kuzviedza iwe pachako.
2. Kudhanilodha Overview
Ukatarisa yangu Maitiro ekuisa Spyera gwara, iwe uchaona kuti iyo yekurodha nzira iri nyore kwazvo. Iko hakuna nhanho yekurodha inoda iyo yakakwira hunyanzvi hunyanzvi uye inogona kuitwa nemunhu wese.
Kana iwe uchida kuve nechokwadi chekuti zvese zvichafamba mushe, tarisa padanho nhanho mirairo iyo inokutungamira iwe kuburikidza nhanho imwe neimwe uye zvakare inokupa iwe netsananguro.
Zvakare, iwo mukana weiyi yekutarisa app kurodha pasi nzira inguva. Unogona:
download Spyera on iPhone mune isingasviki maminetsi maviri,
download Spyera on Android nhare mbozha isingasviki maminetsi maviri.
Saka kurodha pasi kuri nyore uye nekukurumidza. Tevedzera kurodha mirayiridzo uye mumaminitsi asingasviki maviri iyo app ichave inotorwa pafoni nhare.
3. Kuisa Overview
Kana iwe kukopa Anwendung ipapo unofanira kuisa pamusoro kubaya foni.
Maitiro aya anotorawo iwe 2 kwemaminitsi. Mune maitiro ekuisa Spyera pane yakatarwa nhare nhungamiro, unogona kuona kuti nhanho idzi zvakare dziri nyore uye iri kupinza yekumisikidza kiyi yawakapihwa iwe muiyo email yekutambira mushure mekutengwa kwaitwa.
Saka kuupfupisa iyo yese kurodha pasi uye kuisirwa maitiro kunotora iwe isingasvike maminetsi mana.
Izvi kutsanya chaizvo uye sezvaungaona inotevera 4 maminitsi unogona kutanga vachiongorora kubaya foni. Bhenefiti yekupedzisira yekumisikidza ndeyekuti inotsigira ese nhare mbozha mapuratifomu.
Unogona kuisa iyo app pa:
Android nhare mbozha uye piritsi,
iOS iPhone uye iPad,
4. Zvimiro Zvekutarisa
Mune maficha ekuyedza, ini ndinopatsanura shanu dzakanakisa spy maficha aunopihwa kwauri
Kufona Kurekodha & Kurarama Kufona Kuteerera,
Ambient Kurekodha & Kurarama Kupoterera Kuterera,
Remote Stealth Kamera & Rarama Mufananidzo Wakatora,
Zvemagariro Media & IM Chats Spy,
Password Grabber kana Password Cracker.
Chekutanga zvinhu zvitatu zvinoitwa kuburikidza nemutemo wepachivande wakatumirwa kubva kufoni yako yaunosarudza mune yepaneru panhare. Paunongotumira iwo wekuraira nangananga foni inotanga kurekodha mafoni kana ambient mitinhimira kana kumisikidza yakanangwa foni kamera uye inobvumidza iwe kuona nharaunda.
Kubatsira kukuru ndechekuti iwe unogona kuseta zviyeuchidzo. Kana iyo yekuvavarira foni ichigamuchira inopinda kana kutanga runhare rwunobuda, iwe unozonyeverwa kuti iwe ugone kuteerera rarama hupenyu hwese hurukuro. Iyi ficha yakasimba inongowanikwa mu FlexiSPY uye Spyera foni maapplication.
Spyera Runhare pasocial media & IM chats musori maficha rondedzero zvakare zvakareba kwazvo.
Iwe unokwanisa kuongorora zvese zvemagariro enhau zviitiko zvekuti hapana chinozovanzwa kwauri.
Imwe yemabhenefiti akakura epurogiramu iyi ndeyekuti iwe unopihwa yemahara password yekubamba app.
Pasiwedhi inobata inotora zvese zvinokosheswa foni mapassword saka kana iwe uchinge waisa iyo app, iwe unozodzidza zvese zvinangwa mapassword. Kunyangwe kana iyo target ikachinja password inozotorwa uye iwe unozogona kutora izere kutonga pamusoro pechinangwa nharembozha nhare yeInternet zviitiko.
Saka kana iwe ukatarisa pazvinhu zvekutarisa, Spyera ndeimwe yeakanakisa ekutarisa maapps ari pamusika nhasi.
5. Kutsigira Kuongorora
Yekupedzisira muchikamu cheSpyera chinobatsira ongororo. Kubatsira kukuru ndekwekuti iwe unopihwa yese yemahara rutsigiro sevhisi.
Pane zvikamu zviviri zvebasa rekutsigira:
tsamba yekubatsira rubatsiro,
rarama kufona rutsigiro rubatsiro.
Saka ese masevhisi emahara.
Zvakare nekutenga kwaSpyera, hapana mimwe mari yekuwedzera. Iwe unongobhadhara kuongorora app uye ndizvozvo.
Saka iwe unofanirwa kuedza Spyera nekuti ndeimwe yeakanakisa ekutarisa maapps ari pamusika nhasi uye sezvaungaona mune ino Spyera ongororo hauzozvidemba.
Spyera foni - kubva $ 32.41 / mwedzi
(5 kubva 5)
Maitiro ekuisa Spyera
Spyera Runhare Ongororo - Cons
Pane imwe chete nzira yekubhadhara yakatsigirwa. Unogona kutenga iyo app chete neCredit / Debit makadhi.
Munguva yeSpyera kuongorora kuongororwa, pakanga pasina zvinokuvadza zvakawanikwa.
Tenga Spyera Ongororo
Kutanga, mune Spyera ongororo akateedzana kutenga Spyera ongororo. Mukutenga Spyera ongororo, iwe unozodzidza zvese zvakanakira nekuipira izvo Sora nzira yekutenga. Zvakare, ini ndichatarisa pane yakajairika mibvunzo iyo vashandisi vanayo nezve yekutenga maitiro.
Ok, ikozvino ini ndichatsanangura kutenga nzira yekutenga Spyera kuongorora chinangwa. Maitiro ekutenga ane matanho matatu akapusa. Aya matanho ndeaya:
Kusarudza edition: Spyera Smart foni, mapiritsi, Zvese mune imwe vhezheni.
Zadza ruzivo runodiwa pane Yakachengeteka Kutenga Peji.
Tarisa tsamba yako kuti uone Welcome email message.
Aya matanho ari nyore kwazvo. Kutanga, iwe sarudza edition uye woenda kune iyo tenga peji kuti utenge iyo app. Ikoko iwe unozofanirwa kuzadza ruzivo rwekutenga uye kana iwe ukaisa odha, iyo email yekutambira inopihwa kwauri mukati memaminetsi mashoma.
Mukuyedzwa, iyo email inogamuchirwa inouya nekukurumidza neruzivo rwese rwunodiwa. Izvo chete chinodiwa pakuita kutenga yaive internet yekubatanidza uye kiredhiti kadhi. Iko hakuna chimwe chinodikanwa saka iyi Anwendung inogona kutengwa nechero munhu kubva chero kupi kutenderera pasirese. Mune masekondi mashoma iwe unozodzidza kuti ndedzipi nzira dzekubhadhara dzinotsigirwa, zvakadii uye chii vimbiso yauinayo iyo Spyera inoshanda.
Spyera inogona kutengwa kubva kune yakachengeteka kutenga peji inotsigira Chikwereti / Debit Kadhi nzira dzekubhadhara:
Spyera ndeimwe yeakanakisa Monitoring App pamusika. Ichi chishandiso chinokupa iwe zvese zvemberi zvemberi maficha uye chinoshandiswa kutora izere kutonga pamusoro pechivavarira foni uye piritsi ine Android, iOS, Blackberry kana Symbian OS. Sezvo iwe uchigona kufungidzira kuti ichi chirongwa chinodhura zvimwe. Mutengo unotanga kubva pa $ 49.67 pamwedzi. Iyi haisi mhinduro yakachipa asi ndeimwe yemhinduro dzakasimba pamusika. Spyera isoftware inogona kushandiswa nechinangwa chepamutemo senge:
Zvakare, kune akasiyana mitemo yekuvanzika munyika yako asi izvi zvinoshandiswa zviri pamutemo mumatunhu mazhinji.
Ko Spyera app ichashanda here? Ndingava sei nechokwadi?
Iyo vimbiso yekuti Spyera Anoshanda basa mazuva gumi ekudzosera mutemo. Saka iwe unogona kuwana iyo yakazara kudzoreredzwa mukati memazuva gumi. Saka neinishuwarenzi iyi, hauna chaungarasikirwe nacho. Edza izvozvi uye tanga kuongorora kubaya foni mukati memaminitsi mashanu anotevera. Mune masekondi mashoma iwe uchadzidza pane nzira yekuwana Spyera yemahara kurodha apk.
Spyera Yemahara Kurodha pasi
Mhinduro iri nyore kwazvo. Spyera chigadzirwa chemadhijitari uye hapana nzira yekuchiwana mahara. Zvimwe zvinyorwa zvinogona kukupa iyo Spyera yemahara apk, Spyera yemahara yekurodha app, Spyera yemahara app yakatsemuka vhezheni kana Spyera yemahara rezinesi kiyi asi cherekedza izvo zvakanyanya kunaka kuti zvive zvechokwadi. Aya maSpyera app emahara ekudhawunirodha mafaira ndeenhema uye mune angangoitika ese ane hutachiona kana kuita chero chinhu.
Ungaita sei iwe kuti uwane yakachengeteka Spyera yemahara app kuti uedze iyo?
Nzira chete yekuedza iyo app ndeyekutenga. Unogona kudzorera app mumazuva gumi ekudzosera nguva. Saka iwe a + hauna chaunorasikirwa. Kana iwe uchinyatsoda kuongorora zvese zvakanangwa nhare zviitiko edza iyi mhinduro uye hauzozvidemba.
Tenga Spyera Ongororo Mhedziso
Chekutanga cheSpyera chiongorora mhedzisiro ndeye kutenga Spyera kudzokorora mhedziso. Pano ndinoda kucherechedza kuti Spyera chirongwa chine simba kwazvo chinogona kugutsa kunyangwe nyanzvi dzekuongorora dzinodiwa. Maitiro ekutenga ari nyore, anokurumidza uye akachengeteka. Icho chigadzirwa che digital chinogona kutengwa kutenderera pasirese. Saka inotsigira nyika dzese uye izvo chete zvinodiwa kuti iwe uve neinternet yekubatanidza uye Kiredhiti kadhi.
Iyo vimbiso yekuti Spyera ichashanda mazuva gumi akazara ekudzosera mutemo. Saka edza uone zvivakwa zvacho wega.
Dhawunirodha uye gadza Spyera Ongororo
Chechipiri mune Spyera ongororo akateedzana kurodha pasi uye kumisikidza Spyera ongororo. Mukurodha pasi uye nekuisa Spyera Ongororo, iwe unozodzidza ese software kurodha uye kuisa maitiro. Iwe unenge uine maonero ari nani mu software zvakasarudzika senge kurodha pasi uye kumisikidza nguva pamwe nezvinodiwa izvo zvinodiwa kuti upe yekutarisa app kuzara pamusoro peiyo foni foni.
Spyera kurodha pasi uye kuisa maitiro ari nyore kwazvo. Chinhu chega chaunofanirwa kuita kutevedzera nhanho nhanho mirairo. Iwe unogona kuwana iyo Spyera yekuisa mirayiridzo mune maitiro ekuisa Spyera yekuisa gwara. Mune masekondi mashoma iwe unozodzidza zvese kurodha zvakasarudzika.
Spyera Dhawunirodha Ongororo
Spyera dhawunorodhi wongororo iri pamusoro peapps zvakasarudzika. Pano iwe uchadzidza kuti zvinotora nguva yakareba sei kutora iyo app uye chii chauchazoda kuita mune ino maitiro.
Zvinotora nguva yakareba sei kuti nditsigire Spyera pane iPhone uye Android?
Mubvunzo unowanzoitika ndeyekurodha nguva ye iPhone neApple. Nguva yekuburitsa Spyera pane iPhone uye Android inogona kusiyanisa zvichienderana nekwakananga foni kurodha internet kumhanya. Zvisinei, zvinotora anenge masekondi gumi neshanu. Iyo yese yekurodha maitiro e iPhone ne Android inokutora iwe ingangoita maminetsi maviri.
Ndinoda kucherechedza mune ino Spyera wongororo dzakateedzana kuti mumaminetsi maviri enzira yekuodha pasi inosanganisirwa Android…
gonesa masosi asingazivikanwe,
dzima ongorora maapplication
… Ne iPhone…
Cydia nyowani sosi inowedzera,
Cydia nyowani sosi
Dhawunirodha Spyera Mhedziso
Mukurodha Spyera ongororo yekupedzisira, ndinoda kuona kuti mukana uri nyore kurodha maitiro. Chinhu chega chaunofanirwa kuita kutevedzera nhanho nhanho mirairo iwe yaunopihwa kwauri. Nguva yekuodha pasi zvakare yakaderera kwazvo. Maitiro acho anogona kuitwa mumineti imwe asi kana usiri nyanzvi ndinoda kuona kuti hazvingatore iwe kupfuura maminetsi maviri. Saka zviri nyore, tora kubaya foni, tevera nhanho nhanho kurodha mirairo uye haugone kukanganisa.
Spyera Isa Ongororo
Pane Spyera yekumisikidza ongororo, iwe unozodzidza zvakakosha kuisa ruzivo senge anotsigirwa maturusi, maitiro ekumisikidza uye nekuisa nguva Ini zvakare ndichataura pane nzira yekumisikidza Spyera kure pane iyo iPhone kana Android yekuvavarira foni. Saka ngatitangei neruzivo rwemidziyo yakatsigirwa.
Ndeapi madhijimendi anotsigirwa neiyi yekutarisa app?
Iyi yekutevera inotsigira:
Nhare mbozha yeAndroid,
Zvakare, vashandisi vanoda kuziva kuti inotsigira ese matsva mamodheru. Iyi purogiramu ndeimwe ye yakanakisa yekutarisa mhinduro pamusika saka inogara ichivandudzwa uye ese matsva mamodheru anogara akatsigirwa. Iyo app inokutendera iwe ku:
Dhawunirodha uye gadza app pane ese maApple iPhone uye iPad majeri akaputsika.
Dhawunirodha nekuisa app pane ese mafoni eApple uye mapiritsi.
Dhawunirodha nekuisa app pane ese maBlackberry nharembozha OS kusvika 7.x.
Dhawunirodha uye gadza app pane ese Symbian Anna uye Belle OS shanduro.
Zvichatora nguva yakareba sei kuti ndiise Spyera pane iPhone uye Android?
Maitiro ekuisa eApple neApple haazotora nguva yakawanda kupfuura kurodha pasi maitiro. Kuiswa kweiyi spy app kuri nyore kwazvo. Iine matanho mashoma chete uye zvakanyanya, zvinosvika pakushandisa app. Kuti uite izvi iwe unofanirwa kuve nekiyi yekushandisa iyo iwe yaunopihwa kwauri nekutenga.
Saka Spyera Android uye iPhone yekuisa maitiro anozotora iwe angangoita 2 maminetsi. Kana isu tichiverenga iyo yekurodha pasi nzira nguva ipapo iwe unogona kuona kuti kunyatso kurodha pasi uye nekuisa maitiro anotora maminetsi mana.
Heano ese nguva:
Maminetsi maviri ekudzivirira kunyorera app.
Maminetsi maviri ekuisa iyo yekutevera app.
4 maminitsi kurodha pasi uye kumisikidza Spyera pane yakatarwa foni.
Maitiro ekuisa Spyera kure pane yakanangwa foni? Izvi zvinogoneka here?
Nehurombo, izvi hazvigoneke. Iko hakuna nzira yekumisikidza Spyera kure pane yakanangwa foni pasina kuiwana iko kwekutanga. Iko hakuna app inogona kure kurega kuisa pane yakatarwa foni nekuti mafoni ese ane dziviriro. Zvakare, iwe unogona kuona maitiro ekuisa Spyera gwara kuti maitiro aya ane mamwe matanho anofanirwa kuitwa uye anoda chiito chevanhu.
Saka uchafanira kutora kubaya foni uye ave nayo kweinenge 4 maminitsi kuti kuisa ichi yemhando zvichiongororwa Anwendung pairi.
Isa Spyera Mhedziso
Mune iyo yekugumisa Spyera mhedziso, ndinoda kuona kuti nguva yekuisa yakanyanya kuderera.
Zvinoshamisika nekuda kwenzvimbo dzese dzepamberi dzekuongorora senge kufona kurekodha, nharaunda yekuteerera, uye spy kamera. Iyo yese kurodha pasi uye kuisa maitiro inogona kuitwa mumaminitsi mana.
Zvakare, iyo yekuisa maitiro iri nyore kwazvo nekuti iwe unopihwa nhanho nedanho mirairo. Iyo app inotsigira ese maApple uye iOS mafoni uye piritsi asi zvakare ine mukana wekutsigira iyo Blackberry uye Symbian zvishandiso zvakare izvo zvinotsigirwa ne mashoma mashoma ekutarisa maapp
iPhone uye Android kuisa uye kurodha Zvinodiwa Ongororo
Iwo akasiyana maserura OS shanduro dzine dziviriro dzakasiyana izvo zvisingatenderi iwe kuti utore kana kumisikidza app usingaadzime., Muzviitiko zveIOS, hazvibvumire iwe kuisa iyo app uye mukati, Android kesi haizoiti bvumira iyo app kutora rumwe ruzivo. S kuchengetedzwa uku kunofanirwa kubviswa kuitira kuti uwane basa rakakodzera rekutevera. Mukurodha pasi uye nekuisa Spyera wongororo ini ndinokupa iwe ruzivo nezve izvo zvina zvinodiwa:
1. Panyama kuwana kurodha pasi nekuisa Spyera pane Android uye iPhone
Kuti utore nekuisa iyo Spyera app paApple uye iPhone, iwe uchafanirwa kuve nemuviri mukana kune chakanangwa nhare mbozha nhare. Izvi zvinodiwa nekuti izvi zvine matanho mashoma anoda zviitwa nevanhu. Iwe unogona kuona aya matanho mune yekumisikidza gwara.
2. Indaneti yekubatanidza ye iPhone ne Android zvishandiso
Indaneti inodiwa kana iwe uchida kudhawunirodha app. Iwe unozofanirwa kuisa dhawunorodha link uye kurodha pasi kuburikidza neindaneti. Imwe sarudzo kurodha pasi app yacho pakombuta, kuendesa kune yakanangwa nhare uye wotanga kuisirwa.
Munguva yekumisikidza maitiro, iwe unozofanirwa kumisa iyo app. Maitiro aya anodawo kubatana kweinternet. Pakupedzisira, iyo app inoburitsa ruzivo uye riise kune yako online account. Uku kuburitswa kunodawo kuti runhare rwekupinda ruratidze kubatana kweinternet dzimwe nguva izvo zvemashoko zvinogona kuiswa.
3. Spyera Android chinodiwa
Kana iwe uchida kudhawunirodha nekuisa Spyera pafoni yeApple hapana chikonzero chekutora midziyo. Anenge ese epamberi maficha senge kufona kurekodha, mhenyu ekuteerera nharaunda, uye spy kamera zvichave zviripo kwauri. Nekudaro, kana iwe uchida kushandisa Yemagariro midhiya uye IM chats maficha ipapo iyo midzi kuwana inodiwa.
Rondedzero izere yeSocial media uye IM chats maficha anoda midzi yekuwana:
Zvese zvimwe zvinhu zvinoshanda zvisina midzi yekuwana. Kana iwe uchida kudzidza zvakawanda nezve chii chiri kutora midzi, uye maitiro ekudzura foni yakatarwa nekukurumidza uye yakachengeteka tarisa rooting gwara:
Mamwe Mashoko Ari Pano: sei Mudzi Android Cell Nhare
4. Spyera iPhone / iPad zvinodiwa
Kana iwe uchida kudhawunirodha Spyera pane iyo iPhone kana iPad chishandiso chinofanirwa kutanga chapwanywa. Ini ndinofanira kucherechedza mune iyi Spyera inoongorora zvinodiwa neApple kuti izvi ndezvemidziyo yeIOS chete nekuti ine dziviriro iyo isingatenderi iwe kuti utore iyo app kubva kwakasiyana masosi kupfuura Apple Chitoro. Mune iyo Nhare Spy gadza gwaro, iwe unogona kuona kuti iwe unowedzera chitsva chitsva kune iyo Cydia app uye wobva warodha pasi iyo app. Jailbreaking ndiyo yekukurumidza uye nyore maitiro ayo anogona kuitwa nemunhu wese. Pano iwe unogona kuwana ruzivo rwese nezve jailbreaking:
Mamwe Mashoko Ari Pano: Sei Jailbreak iPhone / iPad?
Main Zvimiro Spyera Ongororo
Ok uye ikozvino chikamu chakanakisa cheSpyera ongororo akateedzana ndiwo makuru maficha Spyera ongororo. Spyera ine akawanda akasarudzika uye ane simba maficha ayo anotendera iwe kuti utarise zviitiko zvakawanda. Izvo zvizere maficha ongororo angave iwo akareba chinyorwa. S mune akakosha maficha Spyera ongororo, ini ndichatarisa pane akanakisa ekutarisa maficha:
1. Call Kufona uye Live Call Kuteerera
Kufona kurekodha uye kurarama kufona kuteerera ndiyo yepamusoro Musori ficha iyo ini yandichatsanangura mune iyi Spyera ongororo. Iyi ficha inokutendera kuti urarame kuti uterere kufona kana kuitorera uye nekuteerera kwese paunoda. Zvakare, iwe unozogona kuhwanda rekodhi uye kuteerera kune kunyange iyo VoIP mafoni. Iyi ficha inowanikwa kuburikidza neye spy spy iyo inoda kutumirwa kubva kune inoona foni iyo inogona kumisikidzwa kure kubva kune inodzora pani.
Kuti uite izvozvo, iwe uchafanirwa kuita Spyera login uye enda kuControl Center. Ita shuwa kuti iwe unoisa yekutarisa nhamba mune yepasirese fomati.
muenzaniso: + 1867654321
Ndinoziva sei kuti yakanangwa foni yakagamuchira nhare?
Kana iwe uchida kurarama teerera kufona kana mune mamwe mazwi, bvisa kufona ipapo uchafanirwa kumisikidza chenjedzo. Iwe unogona kuseta kusvika gumi chaiwo manhamba efoni uye kana kamwe foni yekufona ikaitika, iyo SMS ichatumirwa pane iyo yekutarisisa nhamba iwe yawatsanangura mu control panel. Saka iwe uchagamuchira zvese uyezve iwe unoda kufona kubva kune-pre-yakatsanangurwa nhamba iyo yekuvavarira foni uye kujoina hurukuro.
Ino mhenyu inobvisa kufona ficha ndiyo yakasimba kwazvo Spyera ficha iyo inokutendera iwe kuti uterere kunongedza runhare kure. Unogona kukamura chero runhare rwekufona uye nekuteerera kubva kure kureva. unogona chamber kubaya foni kubva kumativi ose enyika.
2. Ambient Kurekodha uye Kurarama Kuteerera Kwakakomberedza
Ambient kurekodha uye mhenyu yekuteerera yakatenderedza ndiyo yechipiri yepamusoro inobatsira uye yekumberi chimiro. Ichi chimiro chinokutendera iwe kumisikidza yakanangwa foni maikorofoni kubva kure yakachengeteka uye teerera zvinoitika mune yekuvavarira foni yakatenderedza. Iwe unogona zvakare kunyora zvakapoterera uye teerera pairi chero paunoda.
Chikamu chakanakisa ndechekuti iwe unogona kuseta zvese zviri kure. Pane iyo control panel, iwe unofanirwa kuisa iyo yekutarisisa nhamba. Ndiyo fomu yefoni iyo yauchazotumira kure mairairo. Paunenge uchimisikidza, iwe unogona kwese kubaya foni uye kufona hakuzoonekwe, Spyera app iyo iwe yaunoisa inozvidzivirira uye kumisikidza maikorofoni pachinzvimbo. Ipapo iwe uchagona kurarama teerera kune kubaya foni yakapoterera.
3. Remote Stealth Kamera
Iyo iri kure yekunyepedzera kamera activation ndiyo ficha iyo yakaitwa mune ino yekumberi spy app. Iyo inokutendera iwe kutora mifananidzo mhenyu kubva kune yakanangwa foni kamera. Izvo zvinoitwa zvakare kuburikidza nekodhi kodhi iyo inotumirwa kune yakanangwa foni. Iyi kodhi ichapa iyo yakavanzwa app pane yakatarwa foni kuraira kuti uite kamera uye kutora mufananidzo.
Saka neSpyera iwe unogona kuregedza kubaya foni maikorofoni kana kamera kuti uterere uye uone kubaya foni yakatenderedza Sezvauri kuona iyi Anwendung ine simba chaizvo uye anotora izere kubaya mudziyo.
4. Zvemagariro midhiya uye IM (Instant Meseji) Chats Spy
Zvemagariro midhiya uye IM chats spy izuva rino rinobatsira kwazvo chinhu. Ichi chiitiko chinokutendera iwe kuteedzera ese akanangwa nharembozha yemagariro midhiya zviitiko. Spyera Runhare iri iyo app iyo iyo inobvumidza iwe kuti utarise dzakasiyana IM IM chats. Iyo ine imwe yeakanyanya rondedzero e IM chats ayo anogona kuongororwa. Mune tafura iri pazasi, ini ndinonyora rondedzero izere yeI IM yekutsvagisa zvivakwa zvese zvePamusoro 4 spy software.
Sezvauri kuona Spyera nhare uye FlexiSPY vane akanakisa IM chat chat musori maficha. Zvakare, chimiro cheVoIP chinotenderwa neiyo software chinorekodha mafoni ese kubva kuIM chats. Saka iyi Anwendung achakupa zvizere vies pamusoro kubaya Social vezvenhau uye IM Chats mabasa.
5. Kubata password kana password Cracker
Pasiwedhi inobata app ndiyo yekupedzisira ficha iyo ini yandichatsanangura mune yakakosha ficha Spyera ongororo. Nezvinyorwa zvese, iwe unopihwa iyo yemahara yemahara app inonzi Spyera Password cracker. Iyo password cracker ndiyo Anwendung iyo inotora yakanangwa nhare email, Yemagariro midhiya uye chengetedzo maitiro mapassword. Anwendung ichi anouya Spyera uye unogona kurishandisa mangoti iwe gadza Spyera pamusoro kubaya foni. Saka iyi app inotora:
Saka vese password ichabviswa kubva kubaya foni uye kupihwa kwauri. Unogona danda mukati kubaya maakaundi uye uone zvese iwe pachako.
Main maficha Spyera Mhedziso
Aya ndiwo makuru maficha Spyera ongororo mhedziso. Pano ndinoda kutaura kuti Spyera ine zvese zvine simba maficha izvo zvinokutendera iwe kutora izere kutonga pamusoro peiyo kubaya foni. Muchikamu chino che Spyera ongororo akateedzana iwe unogona kudzidza zvese hunhu hwepamusoro mashanu maficha:
Mukana mukuru wekurekodha uye kurarama kuteerera kwekufona uye ambient ndeyekuti maficha aya anogona kuiswa kure. Iwe unogona kuseta yekutarisa nhamba uye mushure meizvozvo zvese zvinowanikwa kwauri nemirairo yakavanzika. Pane imwe nguva runhare runogamuchira kuraira zvinotora matanho. Iyo yekumusoro yekumisikidza maitiro anoshandira kure kurekunyepera kamera activation zvakare.
Zvimiro senge Zvemagariro midhiya uye IM chats spy ndeiyi yanhasi huru yekutevera kosi. Spyera Runhare iri iyo app iyo ine yakanyanya IM chats yekutevera runyorwa pamusika. Saka, mune chinyorwa, iwe unogona kuona izere runyorwa iyo iri yakakura kwazvo.
Yekupedzisira yekumberi Spyera Runhare yekutarisa chinhu ndeye password yekubata. Kamwe iwe dzishandise Anwendung unokwanisa kuona zvose kubaya dzenhare mavara echivande…
Nezve iwo mubvunzo wemabatiro aungaita Spyera, ndinogona kupindura kuti Spyera inoshanda mune yakazara nzira uye iwe haugone kuiona. Saka chimwe cheSpyera maficha zvakare anonyengera uye zvisingaite nzira yekuona Spyera pane yakanangwa nhare mbozha. Kana iwe ukatarisa pazvinhu zvekutarisa, Spyera ndeimwe yeakanakisa ekutarisa maapps ari pamusika nhasi.
Spyera Kutsigira Ongororo
Iyi ndiyo yekupedzisira yeSpyera wongororo dzakateerana uye inotsigirwa FlexiSPY ongororo. Mune rutsigiro Spyera ongororo, ini ndinokupa iwe yakakosha ruzivo nezve nerubatsiro iwe rwaunogona kuwana. Rutsigiro rwehunyanzvi runogona kuwanikwa kuburikidza netsamba uye kufona:
Bata rutsigiro rwehunyanzvi kuburikidza netsamba: [email inodzivirirwa]
Rarama kufona main main support nhamba: +852 5808-3757
USA mhenyu kufona runhare nhamba: + 1 (646) 760-1575
Iyo technical technical ndeyemahara?
Ini ndoda kucherechedza kuti hapana imwe yekuwedzera muripo iyo iwe yaunofanirwa kubhadhara kutsigira. Unogona kutaurirana nerutsigiro kuburikidza netsamba kana kuvasheedza pasina chero mari yekuwedzera.
Mune rutsigiro Spyera ongororo mhedzisiro, ini ndichaona kuti rutsigiro rwuri rwemahara zvinoreva kuti hapana zvimwe zvekuwedzera mari senge mune zvimwe zvigadzirwa zvinoenderana. Rutsigiro rwehunyanzvi runogona kutaurwa kuburikidza netsamba uye kurarama kufona. Vashandi vekutsigira vakanaka uye ivo vanokupa iwe ruzivo iwe rwaunoda.
Ichi chaive chinyorwa chakagadzirwa nekuunganidza kweSpyera wongororo 2021:
Tenga Spyera Ongororo.
Dhawunirodha uye gadza Spyera Ongororo yeApple uye iPhone.
Main Zvimiro Spyera Ongororo.
Tsigira Spyera Ongororo.
Pakupera kweSpyera ongororo 2021, ndinoda kutaura kuti nepo ini ndichiyedza zvivakwa zvayo, pakanga pasina chakakura chakawanikwa. Iyo app inoshanda sezvainofanira. Zvese maficha zvaiwanika kwandiri uye zvese zvinoshanda zvikuru. Mukana mukuru wekutenga maitiro ndeyekuti inokurumidza uye yakachengeteka. Dhawunirodha uye gadza maitiro ari nyore uye zvinogona kuitwa mumaminitsi mana. Iyi Anwendung ine yakakura kwazvo maficha runyorwa. Inokutendera iwe kuongorora…
Ambient Kurekodha & Live Surrunding Kuteerera,
… Nezvimwe zvakawanda. Kana uchida nyanzvi yekutarisa app kupfuura ini ndinokurudzira iwe izvi seimwe yepamusoro 4 yekutarisa maapps pamusika.
Muenzaniso: 89 / 100
Mutengo: kubva $ 32.41 / mwedzi
Chokwadi Spy Ongororo Pros & Cons - Zvinoshanda here? Nhare Kuongorora Ongororo 2021 Chokwadi Chinoshora Chinoshanda Here? Verenga Chokwadi Chedu Chakazvimirira Uye Chisingasaruri ...
Auto Pamberi Ongororo Pros & Cons - Zvinoshanda here? Mafoni Spy Ongororo Ongororo 2021 Inoita Auto Mberi Basa? Verenga Yedu Yakazvimiririra uye Isingasaruri Auto ...
Inofona Spy Basa? Nezvedu - Munyori Jeff Tinklet Ini ndinonzi Jeff ...
Maitiro ekuisa Spyera pane Android uye iPhone? Spyera Kuisa Nongedzo Unoda kudzidza kuisa Spyera pane Android, iPhone uye ...
Cell Runhare Spy Ongororo - Wepamusoro # 3 Kuyedza - Cell Nhare Spy Software Vanopfuura makumi maviri Nhare mbozha Spy Software yakaedzwa ...
Tags: flexi spy akasununguka, inoshanduka 2021, flexispy apk, flexispy yemahara, vakasununguka spyera, spy email, spyera apk, spyera wongororo |
22 Comments · Siya Komendi
Ndakaedza kubata rutsigiro rwevatengi kakawanda pasina mhinduro kune rubatsiro runodiwa. Ini pakutanga ndakatenga 3 months @ 189.00 muna Chikunguru 2020 uye mushure memwedzi mumwe (one) kusvika musi uyu, ndakaedza kupinda mudashboard rangu uye rinoti account yangu yapera! Izvo zvisiri zvechokwadi ndinofanira kunge ndakanaka kuburikidza naGumiguru 1. Ini ndoda kuwana sevhisi yandakabhadhara. Mumwe munhu angadzokera kwandiri nemhinduro kune dzangu nyaya ????
Kana iwe uchiti vanovavarira foni inofanirwa kunge iri jeri rakatyoka, Izvi zvinoreva here kuti ini ndinofanira kutora panyama foni kumwe kunhu kuitira kuti jeri riputswe nemunhu? kana spyware jeri rinozondityora? kana spyware inondiratidza maitiro ejeri kupaza tarisiro foni?
Iyo Spyera app inokutendera kuti utarise iPhone chete f iyo foni yakaputsika uye iyo yekutarisa app yakaiswa mufoni. Ku jailbreak chishandiso iwe uchazoda jailbreak app uye kune zvakawanda zvemahara maapps pamhepo. Iyo Sypaera iri kuongorora app uye haina hunyanzvi hwekupaza chishandiso asi iine kugona kuvanza iyo jailbreak trace pane yakanangwa iPhone.
Saka ndiyo Spyera. Imwe yeapamberi yekutevera app painternet asi inoda kuwanikwa.
Kana uchifarira hapana jailbreak uye hapana gadza iPhone zvichiongororwa Anwendung zvino I zano mSpy. Zvimwe pano:
Ndanyora paSpyera.com/technical-support-request, asi havapindure
Saka kuti utange kuongorora neSpyera, iwe uchafanirwa kuisa iyo app pane yakanangwa nhare mbozha. Ndinofungidzira kuti wakazviita mwedzi mishanu yapfuura. Waka bvisa iyo app usati wamira kuongorora?
Kana zvirizvo saka iwe uchafanirwa kuiisa zvakare. Usati wataura kuti haugone kuwana iyo yekushandisa kodhi. Zvakanaka, ipapo ini handigone kuita zvakawanda nekuti unozvitenga nguva refu yapfuura uye ndinofungidzira kwete paPhone Spy. Kutsigira kwaSpyera kunononoka asi ivo chete ndivo vanokwanisa-kuendesa yako Spyera kunyorera.
Zvakare, pane imwe mhinduro. Unogona kudzoreredza kutenga kwako uye tenga iyo app zvakare pano. Ipapo iwe unogashira ruzivo rwese rwunodiwa nekisheni yekumisikidza uye nemirayiridzo yekuti ungatanga sei kutarisa neSpyera yekutarisa app
ndinofanira kukubvunza zvakare, ndapota understandi. Ndakaburitsa Spyera mushure memwedzi mishanu, account yangu yakavhurika. Asi ini handigone kuwana chero data kubva kunobatsira. Chii chandinofanira kuita? Ndapota ndiudze. Ini ndinonyora nerubatsiro rwegoogle translation uye ndinovimba unonzwisisa email yangu.
Ini ndatsvaga iyi link: spyera.com/technikal-support-request, asi ini gore handibve ndisina kodhi yekuita. Ndokumbirawo kuti mundinyorere kuti ndingawane sei kodhi yangu yekushandisa?
Tumira tsamba ku [email inodzivirirwa] zvakananga uye uvabvunze kuti vadzorezve yako Spyera kunyorera kune yako tsamba. Ipapo iwe unenge uine activation kodhi zvakare.
unogona kundibatsira ndapota
Wakawana here rumwe ruzivo mune iyo Spyera wongororo chinyorwa icho iwe chaunoda kuziva zvakawanda nezvacho?
Spyrea inotumira chero ruzivo kuburikidza netsamba
Kwete, hazviiti. Ruzivo rwese rwunobviswa runoiswa kwauri pane yako yepamhepo Spyera account iyo yakagadzirirwa iwe nekutenga. Pane online account, unogona muchivande uye uri kure kuona zvese zviitiko zvakatorwa kubva kubhenefoni nhare neSpyera app.
Spyera iri kushanda ne iphone 8, 8+ uye iphone x?
Iyo Spyera ichashanda pane zvese zvakanangwa iPhone zvishandiso zvinogona kuvharirwa. Imhaka yekuti jailbreak inodiwa pakuisirwa Spyera.
Ini handikwanise kutaura Chirungu, ndiri kunyora iyi email nerubatsiro rweGoogle muturikiri. Yangu abo paSpyera yapera, ini ndoda kuwedzera, ini ndoda kuitisa kodhi. Handina kodhi yekushandisa. Mumwe munhu anogona kundibatsira, Ndingawedzera sei
Ndokumbira kuti ubate rutsigiro pano: https://spyera.com/technical-support-request/. Ivo vanozokubatsira iwe kuwedzera iro rezinesi.
Emma E anoti:
Ndinogona kufambisa Spyera kubva kune imwe foni kuenda kune imwe? Kana mhinduro iri hungu saka shanduko yechinhu chinoitika pazvinhu?
Ndatenda nemubvunzo wako. Iyo Spyera inokutendera kuti ubvise kure kuregedza kutarisa kweimwe nharembozha uye ipapo unogona kutanga kuongorora chimwe chigadzirwa. Ichi ndicho chimwe chezvinhu zveSpyera saka software ichashanda zvakakwana pasina kukanganisa zvimwe zvinhu.
Zvakare, ini ndoda kuziva kuti iwe unogona kufambisa Spyera fomu imwe chishandiso kune imwe isina muganho wenguva sekureba seicho rezinesi rako riri kushanda.
Joel M anoti:
Ini ndoda kuisa Spyera mune nyowani iphone 6 pamwe, ngatiti OS 10.2,
mibvunzo yangu ndeyekuti chii chichaitika kana mushandisi akagamuchira otomatiki kugadzirisa kune OS 10.3 kana nyowani,
Spyera icharega kushanda here?
sekuziva kwandinoita undestand yakawanda yesoftware software inoshanda zvakakwana neApple, ichimisa runhare mukana
kugadzirisa iyo OS, zvakadaro muIOS izvo zvakanyanya kuomarara.
Iwe unofungei nezvazvo?
Is is zvisingaonekwe zvachose?, Ko kana munhu wacho akaunza foni kunaHacker, mubati achawana here
iyo Jailbreak kana chimwe chinhu chinoshamisa?
Mhoro Joel M,
Ndatenda nemubvunzo wako ndichaedza kuvapindura nepandinogona napo.
1. Iyo Spyera foni kana mamwe maPhones Spy maapp inoshanda anoshanda zvakanyanya nekukurumidza kana iwe uchinge waaisa pane iyo kubaya iPhone. Iyo iOS yekuvandudza haifanirwe kukanganisa kushanda kwayo nekuti iyo app ichiripo pane chakanangwa iPhone uye ichiri kushanda mushe senge chero imwe app pane iyo iPhone.
Kune rimwe divi, pane dambudziko neshanduro nyowani dzeIOS nekuti hapana App iyo inogona kupaza jailbreak iyo nyowani iOS vhezheni uye haukwanise kuisa maapp pairi. Nekudaro, munguva pfupi inozove inotsigirwa uye iwe unogona jailbreak iyo iPhone uye nekuisa iyo Spyera kana chero chimwe chirongwa pasina dambudziko.
2. Ehe, iyo Spyera haioneke zvachose nekuti inovanza kumisikidzwa kwese pamwe nekutora midzi uye kupwanya kwejeri.
Kufungisisa kana paine matambudziko ekumhanyisa software iyi neimwe yekubatanidza maficha. Izvo zvinoshandisa rakakura bhatiri uye data? Zvakare, wakamboona here chero matambudziko kutora snapchat dhata (mapikicha uye pakarepo messsges) mushure snapchat yakasimbisa chengetedzo?
Iko hakuna kunetsekana kana iri programu iri kumhanya nemamwe maapp. Iyi Anwendung iri kumashure uye inoburitsa zviitiko zvakajairika.
Bhatiri dhayera ichawedzera asi huwandu hwacho zvinoenderana neyakagadziriswa Spyera Spy maficha. Kana iwe ukamisa zvese zveasori huwandu uhu huchawedzera uye kana ukadzima hunodzikira.
Iko hakuna dambudziko neiyo Snapchat yekutarisa nekuti iyo app inotora nharembozha ndangariro data.
Chokwadi Spy Ongororo Pros & Cons - Zvinoshanda here? Nhare Kuongorora Ongororo 2021
Chokwadi Chinoshora Chinoshanda Here? Verenga Yedu Yakazvimiririra uye Isingasaruri Chokwadi Spy Ongororo. Runhare Spy app yakaedzwa saka iwe ...